Burooyinka xubinta taranka | Zanzu
Burooyinka xubinta taranka
Burooyinka ama ka soo baxa guudka ama hareeraha xubinta taranka ama futada. Burooyinka xubinta taranka ee uu sababay fayraska HPV iyow akhtiyada qaarkood sababa cuncun. Burooyinka xubinta taranka waa caabuqa la iskugu gudbiyo galmada (STI) aad ayayna u faahftaa. Waxaa sidoo kale waxaa lagu gudbiyaa taabashada maqaar ilaa maqaar. Kondhomku had iyo jeer kama ilaaliyo burooyinka xubinta taranka
Waa maxay STIyada?
Garo haddii aad qabto STI